Revhitiko – Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)
Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)
Category Archives: Revhitiko
Mirayiro yeZvipiriso Zvinopiswa 1 Jehovha akadana Mozisi akataura naye ari muTende Rokusangana akati, 2 “Taura kuvana vaIsraeri uti kwavari, ‘Kana munhu upi zvake pakati penyu achiuya nechipiriso kuna Jehovha ngaauye nechipiriso chezvipfuwo, zvemombe kana zvamakwai. 3 “ ‘Kana chipiriso chake chiri chinopiswa chinobva mudanga remombe, ngaape chikono chisina kuremara. Ngaachibayire pamusuo weTende Rokusangana kuti chigamuchirwe […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRevhitikoLeave a comment on Revhitiko 1
Chipiriso cheZviyo 1 “ ‘Kana munhu achiuya kuna Jehovha nechipiriso chezviyo, chipiriso chake chinofanira kuva choupfu hwakatsetseka. Anofanira kudira mafuta pachiri agoisa zvinonhuwira pamusoro pacho, 2 agoenda nacho kuvanakomana vaAroni vaprista. Muprista achatora tsama youpfu hwakatsetseka namafuta, pamwe chete nezvinonhuwira, agozvipisa sechikamu chechirangaridzo paaritari. Chipiriso chakagadzirwa nomoto, chinonhuwira zvinofadza kuna Jehovha. 3 Zvimwe zvose zvinosara […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRevhitikoLeave a comment on Revhitiko 2
Zvipiriso zvoKuwadzana 1 “ ‘Kana chipiriso chomumwe chiri chokuwadzana, uye akapa chipfuwo, chemombe chingava chikono kana chikadzi, anofanira kuuyisa pamberi paJehovha chipfuwo chisina kuremara. 2 Anofanira kuisa ruoko rwake pamusoro pechibayiro chake agochibayira pamusuo weTende Rokusangana. Ipapo vanakomana vaAroni vaprista vachasasa ropa kumativi ose earitari. 3 Kubva pachipiriso chokuwadzana anofanira kuuya nechipiriso chinoitwa nomoto kuna […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRevhitikoLeave a comment on Revhitiko 3
Zvipiriso zveZvivi 1 Jehovha akati kuna Mozisi, 2 “Uti kuvana veIsraeri, ‘Kana munhu upi zvake akatadza nokusaziva akaita zvisingabvumirwi pamurayiro upi zvawo waJehovha, 3 kana muprista akazodzwa, akatadza akauyisa mhosva pamusoro pavanhu, anofanira kuuya kuna Jehovha nehando diki isina kuremara sechibayiro chechivi, nokuda kwechivi chaakaita. 4 Anofanira kupa hando diki pamusuo weTende Rokusangana pamberi paJehovha. […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRevhitikoLeave a comment on Revhitiko 4
1 “ ‘Kana munhu akatadza nokuti aramba kupa uchapupu iye achinzi ape uchapupu pamusoro pezvaakaona kana zvaakanzwa, achava nemhosva. 2 “ ‘Kana kuti munhu akabata zvinhu zvipi zvazvo chisina kuchena, zvingava zvitunha zvemhuka dzesango dzisina kuchena, kana mombe isina kuchena, kana zvipuka zvisina kuchena zvinofamba pavhu, kunyange asingazvizivi, atova asina kuchena uye ane mhosva. 3 […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRevhitikoLeave a comment on Revhitiko 5
1 Jehovha akati kuna Mozisi, 2 “Kana mumwe akatadza uye akasavimbika kuna Jehovha nokunyengedza muvakidzani wake pazvinhu zvaakachengeteswa, kana zvaakabatiswa kana zvakabiwa, kana kuti akamubiridzira, 3 kana kuti akawana nhumbi dzakarasika akareva nhema pamusoro padzo, kana kuti akapika nhema kana kuti akaita chivi chipi zvacho chingaitwa navanhu, 4 kana akatadza kudaro akava nemhosva, anofanira kudzosa […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRevhitikoLeave a comment on Revhitiko 6
Chipiriso cheMhosva 1 “ ‘Iyi ndiyo mirayiro yechipiriso chemhosva chitsvene-tsvene. 2 Chipiriso chemhosva chinofanira kubayirwa panzvimbo panobayirwa chipiriso chinopiswa uye ropa racho rinofanira kusaswa paaritari kumativi ose. 3 Mafuta acho ose achapiswa sechipiriso, chimuswe chakakora namafuta akafukidza zvomukati, 4 itsvo mbiri namafuta ari padziri pedyo nechiuno, uye zvakafukidza chiropa, zvinofanira kubviswa pamwe chete neitsvo. 5 […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRevhitikoLeave a comment on Revhitiko 7
Kugadzwa kwaAroni navanakomana vake 1 Jehovha akati kuna Mozisi, 2 “Uya naAroni navanakomana vake, nguo dzavo, mafuta okuzodza nawo, hando yechipiriso chechivi, makondohwe maviri nedengu rine chingwa chisina mbiriso, 3 ugounganidza ungano yose pamusuo weTende Rokusangana.” 4 Mozisi akaita sezvaakaudzwa naJehovha, uye ungano ikaungana pamusuo weTende Rokusangana. 5 Mozisi akati kuungano, “Izvi ndizvo zvarayirwa naJehovha […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRevhitikoLeave a comment on Revhitiko 8
Vaprista vanotanga ushumiri hwavo 1 Pazuva rorusere Mozisi akadana Aroni navanakomana vake navakuru veIsraeri. 2 Akati kuna Aroni, “Tora hando diki yechipiriso chako chechivi negondohwe rechipiriso chako chinopiswa zvose zvisina kuremara ugouya nazvo kuna Jehovha. 3 Uti kuvana veIsraeri, ‘Torai nhongo yembudzi yechipiriso chechivi, mhuru negwayana zvose zvine gore uye zvisina kuremara sechipiriso chinopiswa 4 […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRevhitikoLeave a comment on Revhitiko 9
Kufa kwaNadhabhi naAbhihu 1 Zvino Nadhabhi naAbhihu, vanakomana vaAroni vakatora, mumwe nomumwe, hadyana yake yezvinonhuwira, vakaisamo moto, vakaisawo zvinonhuwira, vakaisa moto usingabvumirwi pamberi paJehovha zvaakanga asina kuvarayira. 2 Saka naizvozvo moto wakabuda kubva pamberi paJehovha ukavapisa vose ndokubva vafa pamberi paJehovha. 3 Ipapo Mozisi akati kuna Aroni, “Izvi ndizvo zvakataurwa naJehovha paakati: ‘Pakati peavo vachaswedera […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRevhitikoLeave a comment on Revhitiko 10
Rwiyo Rukuru rwaSoromoni
Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS), Proudly powered by WordPress.